ဇာတ်တော်လာပန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ဇာတ်တော်လာပန်း	16
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on May 12, 2015 in Photography | 16 comments
2014 ကတည်းက ရှိနေတဲ့ပိုစ်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အဲလာက အမြှောက်ဆံပန်းလား။ အင်ကြင်းပန်းလား။ အဲ ပန်းနှစ်မျိုးက တစ်ထေရာတည်း လို့ပြောကြတယ်။
aye.kk says: အင်ကြင်းပန်းက
ခင်ခ says: ပန်းကလှပေမယ့်
kai says: အင်ကြင်းက… နာမယ်ကိုက..အဆန်း..။ ရုက္ခနာမယ်က.. Couroupita guianensis
The flowers lack nectar, but are very attractive to bees coming for the pollen.
အသီးကလည်း… အမြှောက်ဆံလို.. လူကိုတော်တော်ထိခိုက်မယ့်ပုံရတယ်..။
Nature can provide us at times with the most spectacular examples of flora and fauna. One wonderful exemplar in point isaspecies of tree that is native to the southern Caribbean and northern parts of South America, yet has been known in India for at least 3,000 years, where it is so revered that it is often found growing at religious temples.
The name of this glorious tree is very indicative of the characteristics it displays. Popularly referred to as the ‘cannonball tree’ because not only are the fruits as large, round and heavy as their namesakes, but when falling to the earth, they often do so with loud and explosive noises. Naturally, such trees are not planted next to footpaths, becauseafalling fruit could easily causeafatal injury.
အသီးမှာသရက်..။ အသားမှာဝက်..။ အရွက်မှာလဖက်..။
မြစ်မှာဂင်္ဂါ။ ပန်းမှာမြတ်လေး…… တဲ့..။
မြတ်လေးမပါ..။ အင်ကြင်းမပါ…။ အခုတော့.. အဲဒီဒေသ..နီပေါငလျှင်ရန်ကမှလွတ်ရဲ့လားမသိ…။
အောင် မိုးသူ says: ဇာတ်တော်လာပန်းဆိုလို့ စိတ်ထဲ အင်ကြင်းလားလို့တွေးမိနေတာ တကယ်အမှန်ပဲ။ အင်ကြင်းရဲ့ အနံ့နဲ့ ပွင့်ပုံကိုတော့ အရမ်းသဘောကျတယ်။
Ma Ei says: အင်ကြင်းပန်း ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ခရေစီ…အသွင်ပြင် အရောင် ရနံ့ …
ကိုင်းမှာကပ်ပွင့်တာမို့ အခက်လိုချင်ရင် အကိုင်းအခက်ထိပ်မှာ ဒုတ်ထိုးပြင်ရတာ…လှတယ်
အပွင့်အတိုင်း ပန်းကန်ပြားလေးနဲ့ ထည့်ဘုရားကပ်လဲ လှတာဘဲ…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မပြုံးရေ သစ်ပင်မှာတော့အင်ကြင်းစာကပ်ထားပါတယ်
ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ စွယ်တော်ဘုရား တောင်ဘက်အ၀င်လမ်းမှာအများကြီးရှိပါတယ်။
အင်ကြင်းပန်း ပွင့်ဖတ်ကြီးပြီးတကယ်လှပါတယ်။
အင်ကြင်းပန်းက မြန်မာဇာတ်တွေထဲက ဆယ်လီဘတီပေါ့
ဒီပန်းကို မှီပြီး ဆဒ္ဒါန်ဆင်မင်းဇာတ်ဖြစ်လာသပေါ့။
ကျနော်တို့မြန်မာအများစု ကိုးကွယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရား ပွင့်ချိန်ကတည်းက
မွှေးလို့ လှလို့ ဆိုတာထက် ယုံကြည်ကိုးကွယ်မူ့နဲ့ဆက်စပ်ပါလာတဲ့ပန်းပေါ့။
ဒီအင်ကြင်းပင်ကို ကျနော်သဘောကျလို့သွားရိုက်တာ နှစ်ကြိမ်ရှိသွားပါပြီ
ကျနော်တွေ့ဘူးတဲ့အင်ကြင်းပင်တွေထဲမှာ ဒီအပင်ကအပွင့်ကြီးပြီး ပိုလှနေသလိုပါဘဲ။
Crystalline says: အပြင်မှာမမြင်ဖူးသေးဘူး….. မဝေလည်း ထားဝယ်ဖက်သွားတုန်း အင်ကြင်းပန်းလေးတွေတင်ဖူးသလိုပဲ… အပြင်မှာမြင်ဖူးချင်တယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .အင်ကြင်းကိုင်းကိုကိုင်ကာ..ကိုင်ကာ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ ရွှေတိဂုံဘုရား ကို ရွှေဂုံတိုင်ဘက်က ၀င်တဲ့မုဒ်မှာ တုတ်ကလေးတွေနဲ့ထိုးပြီးရောင်းတာကိုမြင်ဘူးပါတယ်
Ma Ma says: ဇာတ်တော်လာပန်းဆိုလို့ အင်ကြင်းပန်းဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပြီးကြည့်လိုက်တာ အဖြေမှန်သွားလို့ ၀မ်းသာသွားတယ်။
အင်ကြင်းပန်းကို ပုံစံဆန်းပြီး မွှေးလို့ သဘောကျတယ်။
အင်ကြင်းပန်းပန်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာတောင် ရှိသေးတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: နံပါတ်(၃) အခိုင် ဆိုတာလေးက ပန်းချီကား လို့တောင်ထင်ရတယ်။
အင်ကြင်းပန်းက တကယ်လှသလို့ အကြမ်းအတမ်းလဲခံနိုင်တယ်ပြောတယ်
မမ အင်ကြင်းပန်း ပန်ထားတဲ့ပုံလေး တော့ မြင်ဘူးချင်သားဗျာ
အဲဒီအင်ကြင်း ခိုင်လေးရိုက်ပြီးပြီးခြင်းကြည့်တော့ မလှဘူးထင်တာ သေချာကြည့်မှ လှတယ်လို့ ခံစားလို့ရတာရယ်
Alinsett @ Maung Thura says: အခုတလော ရွာထဲမှာ ပန်းပုံလေးတွေ ခေတ်စားနေတယ်… အင်းးး
စိတ်ရှုပ် စိတ်ညစ်စရာ သတင်းတွေ ဓါတ်ပုံတွေ မြင်နေရတဲ့ ကြားမှာ… ဒီလို ကျက်သရေရှိလှစွာသော
ပန်းပုံလေးတွေ မြင်လိုက်ရတော့လည်း… ဖြေသာရာတစ်ခု ရပါသေးတယ်လေ…